သမိုင်းထဲက မြန်မာ့သုတ – ADS Myanmar Blog
၁။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သတ်မှတ်ထားသော “ပင်လယ်ရေပြင်မျက်နှာပြင်”
(Sea Level) မှာ ကျိုက္ခမီမြို့တွင် “သုည” ဟု သတ်မှတ်ထားပြီးမှ တစ်နိုင်ငံလုံးကိုလိုက်၍ အနိမ့်အမြင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြစ်သည်။
၂။ မြန်မာ့သမိုင်းတွင် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန်ကို စတင်ရေးသား ပြုစုခဲ့သူမှာ မက္ခရာမင်းသားကြီး ဖြစ်ပြီး ၁၈၃၃ ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကာလကတ္တားမြို့တွင် ပုံနှိပ်ခဲ့သည်။ ယနေ့အချိန်တွင် နှစ်အုပ်သာကျန်ရှိပြီး တစ်အုပ်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ ကွန်ဂရက်စာကြည့်တိုက်နှင့် ကျန်တစ်အုပ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားပြတိုက်တို့တွင် ထိန်းသိမ်းထားရှိသည်။
၃။ ၁၉၂၃ ခုနှစ်တွင် ဒါရိုက်တာဦးညီပု ရိုက်ကူးခဲ့သော “တောမြိုင်စွန်က လွမ်းအောင်ဖန်” အသံတိတ်ဇာတ်ကားတွင် ကာတွန်းဦးဘကလေး က ဦးရွှေရိုးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ပြီး ဒေါ်မိုးဆိုသည့် ဇာတ်ကောင်မင်းသမီးနှင့် တွဲဖက်ကပြခဲ့ရာမှ ဦးရွှေရိုးနှင့်ဒေါ်မိုး အကသည် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။
၄။ မန္တလေးကျုံးသည် အကျယ် ၂၂၅ ပေရှိပြီး အနက်မှာ ၁၁ ပေ ရှိသည်။ မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးမှ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၂၁ ခုနှစ်တွင် တည်ခဲ့သည်။
၅။ မန္တလေးဈေးချိုနာရီစင်ကို ၁၉ဝ၉ ခုနှစ်တွင် ဝိတိုရိယဘုရင်မကြီး နန်းသက် ၆ဝ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာမှုအဖြစ် ပြုပြင်ခဲ့သည်။
၆။ “Burma” မှ “Myanmar” သို့ ၁၉၈၉ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၈ရက်တွင် တရားဝင်ပြောင်းလဲ ခေါ်ဝေါ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
၇။ ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးနှင့် မြန်မာ့ပထမဆုံး လေယာဉ်ပြန်ပေးဆွဲမှုသည် ၁၉၅၄ ခု ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ဧရာဝတီတိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ကရင်လက်နတ်ကိုင်သုံးဦးက မြန်မာ့လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ပိုင် ဒါကိုတာလေယာဉ်အမှတ် (XYACT) ကို ပြန်ပေးဆွဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကဲ. . . အခုလို ဗဟုသုတရဖွယ်စာအုပ်များကို ဖတ်ရှု့လိုရင်တော့https://www.ads.com.mm/music-movies-books လင့်ခ်အတိုင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
၁။ မွနျမာနိုငျငံတှငျ သတျမှတျထားသော “ပငျလယျရပွေငျမကျြနှာပွငျ”
(Sea Level) မှာ ကြိုက်ခမီမွို့တှငျ “သုည” ဟု သတျမှတျထားပွီးမှ တဈနိုငျငံလုံးကိုလိုကျ၍ အနိမျ့အမွငျ့ နှိုငျးယှဉျခွငျးဖွဈသညျ။
၂။ မွနျမာ့သမိုငျးတှငျ အင်ျဂလိပျ-မွနျမာ အဘိဓာနျကို စတငျရေးသား ပွုစုခဲ့သူမှာ မက်ခရာမငျးသားကွီး ဖွဈပွီး ၁၈၃၃ ခုနှဈတှငျ အိန်ဒိယနိုငျငံ ကာလကတ်တားမွို့တှငျ ပုံနှိပျခဲ့သညျ။ ယနအေ့ခြိနျတှငျ နှဈအုပျသာကနျြရှိပွီး တဈအုပျမှာ အမရေိကနျနိုငျငံ ကှနျဂရကျစာကွညျ့တိုကျနှငျ့ ကနျြတဈအုပျမှာ မွနျမာနိုငျငံ အမြိုးသားပွတိုကျတို့တှငျ ထိနျးသိမျးထားရှိသညျ။
၃။ ၁၉၂၃ ခုနှဈတှငျ ဒါရိုကျတာဦးညီပု ရိုကျကူးခဲ့သော “တောမွိုငျစှနျက လှမျးအောငျဖနျ” အသံတိတျဇာတျကားတှငျ ကာတှနျးဦးဘကလေး က ဦးရှရေိုးအဖွဈ သရုပျဆောငျပွီး ဒျေါမိုးဆိုသညျ့ ဇာတျကောငျမငျးသမီးနှငျ့ တှဲဖကျကပွခဲ့ရာမှ ဦးရှရေိုးနှငျ့ဒျေါမိုး အကသညျ နိုငျငံတဈဝှမျးတှငျ ပျေါပေါကျလာခဲ့သညျ။
၄။ မန်တလေးကြုံးသညျ အကယျြ ၂၂၅ ပရှေိပွီး အနကျမှာ ၁၁ ပေ ရှိသညျ။ မငျးတုနျးမငျးတရားကွီးမှ မွနျမာသက်ကရာဇျ ၁၂၂၁ ခုနှဈတှငျ တညျခဲ့သညျ။
၅။ မန်တလေးဈေးခြိုနာရီစငျကို ၁၉ဝ၉ ခုနှဈတှငျ ဝိတိုရိယဘုရငျမကွီး နနျးသကျ ၆ဝ ပွညျ့ အထိမျးအမှတျအဖွဈ တညျဆောကျခဲ့သညျ။ ၁၉၈၅ ခုနှဈတှငျ မွနျမာမှုအဖွဈ ပွုပွငျခဲ့သညျ။
၆။ “Burma” မှ “Myanmar” သို့ ၁၉၈၉ခုနှဈ ဇှနျလ ၁၈ရကျတှငျ တရားဝငျပွောငျးလဲ ချေါဝျေါသတျမှတျခဲ့သညျ။
၇။ ကမ်ဘာ့ပထမဦးဆုံးနှငျ့ မွနျမာ့ပထမဆုံး လယောဉျပွနျပေးဆှဲမှုသညျ ၁၉၅၄ ခု ဇှနျလ ၂၅ ရကျနတှေ့ငျ မွနျမာနိုငျငံ ဧရာဝတီတိုငျးတှငျ ဖွဈပှားခဲ့သညျ။ ကရငျလကျနတျကိုငျသုံးဦးက မွနျမာ့လကွေောငျးသယျယူပို့ဆောငျရေးအဖှဲ့ပိုငျ ဒါကိုတာလယောဉျအမှတျ (XYACT) ကို ပွနျပေးဆှဲခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။
ကဲ. . . အခုလို ဗဟုသုတရဖှယျစာအုပျမြားကို ဖတျရှု့လိုရငျတော့https://www.ads.com.mm/music-movies-books လငျ့ချအတိုငျး ဝယျယူနိုငျပါတယျ။
Author kyawsoeaungadsPosted on May 29, 2016 May 27, 2016 Categories Ads.com.mmTags Knowledge
Previous Previous post: Night Out ထွက်သူများအတွက် မိုးလင်းပေါက်ဖွင့်တဲ့ ဆိုင် ၇ ဆိုင်
Next Next post: အာရှတိုက်အကြောင်း သိကောင်းစရာ